Hery Rajaonarimampianina : “Tsy hanakana amin’ny fampandrosoana ny efitry ny fisarahana” -
AccueilSongandinaHery Rajaonarimampianina : “Tsy hanakana amin’ny fampandrosoana ny efitry ny fisarahana”
Hery Rajaonarimampianina : “Tsy hanakana amin’ny fampandrosoana ny efitry ny fisarahana”
27/10/2017 admintriatra Songandina 0
Hentitra ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, raha nanambara tamin’ny lahateniny, nandritra ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fihaonamben’ny Diaspora Malagasy, na Fihaonamben’ireo Malagasy mila ravinahitra sy monina any ivelany omaly, teny amin’ny Village Voara Andohatapenaka, fa “tsy tokony hanakana amin’ny fampandrosoana ny firenena ny efitrefitry ny fisarahana”.
“Aoka isika mba tsy ho tafalatsaka amin’ireny hantsan’ny fampizarazarana ireny. Tsy aleo ve mitambatra toa izay zarazaraina tahaka ireny…”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina nanamafy.
Nambarany ampahibemaso nanoloana ireo Malagasy mpila ravinahitra avy any ivelany mantsy, fa tokony hanana hambom-po amin’ny fitiavan-tanindrazana ny tsirairay. Voalaza fa ilaina ny hambom-pon’ny olom-pirenena, satria ny fitambaran’ny hambom-pom-pirenena sy ny hambom-pon’ny olom-pirenena no manome ny hambom-pon’ny firenena.
Notsindrian’ny Filohan’ny Repoblika, fa fotoana izao ilazana, fa ny firenena dia nahavita dingana goavana tao anatin’ny telo taona, anisan’izany ny fandraisana ny Fihaonana an-tampon’ny Comesa sy ny Frankôfônia, ny fihaonana tany Paris, Frantsa momba ny famatsiam-bola, izay hentina hampandrosoana ny firenena, ny fitetezam-paritra maro manerana izao tontolo izao, izay nampahafantaran’ny Filoham-pirenena an’i Madagasikara. Noho izany, raha ny nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, dia efa betsaka ireo mpiantsehatra tonga eto Madagasikara mampiasa ny volany, sns.
Noho izany, hoy izy, ao anatin’izany fisandratan’ny firenena izany no ananan’ny Malagasy tsy an-kanavaka fo miara-mitempo. Izany anefa dia tsy maintsy ao anatin’ny fanajana tanteraka ny fiandrianam-pirenena. “Tsy afa-misaraka ny hambom-pon’ny olom-pirenena sy ny fiandrianam-pirenena. Noho izany, hampirisihina ny rehetra mba hitodika amin’ny firenena hiheverana ny tena fampandrosoana. Ny herintsika rehetra mitambatra no hoenti-mampandroso ny firenentsika”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Ankoatra izay, nohamafisiny koa ny mahakasika ny fifindra-monina, fa io fihaonamben’ny Diaspora Malagasy io no anisan’ny singa iray hitadiavana vahaolana mahakasika izany. Fa eo ihany koa ny famahana ny olana eo amin’ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ny firenena.
Etsy andaniny, nilaza ny tenany mikasika ny Fihaonamben’ny Diaspora Malagasy fa tsy tokony hiandry ny any ivelany hitarika fampandrosoana fa mila fandavan-tena mampiseho fitiavan-tanindrazana. Noho izany, hoy hatrany ny Filoha, hiady hevitra mandritra ity Fihaonambe ity ny Fitondrana sy ireo Malagasy mila ravinahitra any ivelany, ary amin’izany indrindra no hamoahana tolo-kevi-baventy sy tsoa-kevitra amin’ny fampandrosoana. “Hanao soroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra, ho mirahalahy mianala samy hieritreritra fa ny andraikitra dia iraisana. Ny fandavan-tena eo amin’ny tsirairay sy ny finiavana hampandroso ny firenena”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.